Oonchooseersii'aasiisii - Wikipedia
Oonchooseersii'aasiisii, akkasuumas jamiina tiruu jedhamee kanbekammuufi dhibee Roobiisii dhiibee faalama raamoo maxantuu Oonchooseersaa voolvuuloosii dhan kan dhufuu dha. Malatoolen kan argamuu danda'aan , dhaqanaa chaachuu, googaa jala dhitahuu fi jaamina dha. Sababoole ija jaamsan keesaa lamaffaa iraati argama.
Raamichi maxanttuu kan babal'atuu ciniinaa titisakan Simuuliniiyaii fakaatuu. Dhukkuubichann faalamuun yeroo bay'ee hiddamun dhuufa.  Titisoonii naannoo lagaa jirraatuu, kanaafuu moogaasa maqaa issani . Namaa kessa erga galee booda, rammoolenlarvaa umuukuunis akka raamoolen gara googgaa namaati dema. Yeroo kana tiisiisa guraacha nama hidduu faaluu danda'uu. Qorranaa isaa gochuf mallootnii addada, kan akka baayoopsiigoogaa saaliinii barammaa ira goochuunifii haamaa laarvaan dhuuffuu ilaauu, ija laarvaa kesa ilaaluu, fi raamoo gaheessaaf dhitoo kessaa ilaaluudhan.
Talaallindhuukuubichaa hin argamnee. Itiisnii isaa tisiisaan hidammuu irraa off eeguuniidha. Kuunis kan goodhamuu danda'uu wantoota iilbiisoota dhiibanii faydammuu fi uffatasirriti uffachuudhaani. Caraaqiin birraa baay'iina titisootaa farra ilbisootaa afuufuun hir'iisuu faa ta'uu danda'a. Carraaqiin dhibee kana baleesuu,garee namootaa naanoolee aduunyaa heduu wagaatii yeroo lama wal'aanuunidha. Wal'aansii namoota faalaman qoorichaanii dha iinveermeektiiniiyeroo ji'a 6 fi 12 gidduu jirru. Wal'aansiichii laarvaa ajeesa garuu ramoo gaheesa hin ajeesuu. Wal'aasiichiidooksiisaaykliinii, kan nama ajeesuu eendoosiiymbiiontii/kan walqabateebaakteeriyooleee Woolbaachaayii kan ramoolee dadhabbsuufi namoota tokko tokknon kan gorfamuudha. Dhitoo googaa jalaa baqaqsanii bassunis ni danda'aama.
Namootnii miiliiyoona 17 fi 25 gidduu jiran dhibbee tirruu jaamaattiin qabamani, kan 0.8 milliyooniiti tilmaamaman ijjisaani jameera. Faalamootni bay'een kan uumaman biyootaa Afriikaa Sahaaraa gaddii, hata'uus mallee dhimmoolin Yamaaniifii naanoolee addan bahaan Ameeriikkaa giddu galafiAmeeriikaa kiibbaa irras gabafaamaniirruu. Bara 1915 kesa, ogeesiichii fayyaa Roolfoo Roobileesiiyeroo raammicha dhuukuuba ijaa wajin walqabsiiseera. Buffatnii fayyaa adunyaa,taree dhuukuuba gamoojii dagamaatamii irrati ramadeera.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Oonchooseersii%27aasiisii&oldid=31676" irraa kan fudhatame